karo Archives – Axadle
8 Sababood oo Xubnaha Gudiga loo eryi karo
1. Guddiga waxaa ku jira xubno aan qarsoodi ahayn oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ah iyo NISA 2. Xubnaha Komishanku ma laha aqoon, karti iyo xirfad ay ku meel mariyaan doorasho adag oo heerkan ah 3. Xubnaha Guddigu waxay u badan yihiin kooxihii ka qeyb qaatay ololihii doorashada Hogaamiye Farmaajo ee 2017 4. Waxay ku bixisay miisaaniyad adag 2 milyan oo doollar muddo 4 bilood ah iyada oo aan wax tabarucaad ah lagu darin hirgelinta doorashada. 5. Waxay lumiyeen kalsoonidii xisbiyada siyaasadeed ee ku lugta lahaa…
MW Farmaajo ma leeyahay awood uu ku maareyn karo dhameystirka?
Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hogaamiyaha Soomaaliya wuxuu 24/12/2020 soo saaray Xeer Hogaamiye oo ku saabsan maareynta dhameystirka dib u eegista dastuurka iyo ansaxintiisa, Xeerka ayaa la sheegay inuu dhaqan galayo isla maalintii la soo saaray! Sharciga ayaa sidoo kale sheegaya in sharci kasta ama sharci kasta oo aan sharciga waafaqsaneyn dib looga noqdo. Sidoo kale waxaa la sheegay in dib u dhigista dastuurka iyo wax ka badalka dastuurka si loo…